Wasiirka Amniga Puntland Oo Sheegay inaan la aqbali karin Shaqaaqooyin laga abuuro Puntland Gaar ahaan Gobolka Nugaal – Puntland Voice
June 25, 2015 12:34 pm Views: 31
Shir looga hadlayo adkaynta ammaanka Gobalka Nugaal iyo ka hortaga dhibaato ay samayn karaan ciidamo gadoodsan oo ku sugan tuulada Qarxis ee Degmada Eyl ayaa maalinkii shalay lagu qabtay Caasuamdda Puntland ee Garowe.
Shirkaa isaga aha waxaa yeeshey Wasiirka Amniga, wasiir ku xigeenka arrimaha gudaha, mamulka Gobalka, kan degmada, Odayaasha dhaqanka iyo Culimadda Gobalka Nugaal, waxana looga arrin-sanayay in laga hortago qas iyo fowdo ka dhacda Gobalka, waxana loo saaray guddi ka kooban 25-xubnood oo mudo shan cisho ah howshan xiisada taagan soo afjaraya.
Wasiirka Amniga Cabdi Xisri Cali Qarjab oo hadal kooban shirka ka dib warbaahinta siiyay ayaa sheegay Gobalkan inaan loo ogalayn dhibaato iyo dagaal, ayna muhiim tahay dadka sida khaldan u fikiraya inay nabadda iyo horumarka ka shaqeeyaan.
Guddiga loo saaray inay xal ka keenaan ciidanka gadoodsan ee uu horkacayo Gen.Muxyadiin Axmed Muuse ayuu wasiirka Amniga alle uga baryay inuu howsha u fududeeyo.
Nabadoon Khaliif Aw-Cali oo ka mid ah Nabadoonadda Gobalka Nugaal ayaa sheegay in lagu heshiiyay in si wada jir ah looga shaqeeyo ammaanka Puntland gaar ahaan kan Gobalka Nugaal isla markasna la dhammeeyo xiisada ka taagan maalmihii lasoo dhaafay Tuulada Qarxis oo hoos timaada Degmada Eyl ee Gobalka Nugaalka.
Guddiga ayaa durba bilaabay howsha loo igmaday iyadoona shan maalmood ka dib laga sugayo war bixin inay ka keeneen howsha siday noqotay.